विदेशी भाषा को स्कूल - भाषा सिक्दै मनोरंजक हुन सक्छ!
हाम्रो समय मा, विदेशी भाषा बोल्न - जीवनमा ठूलो विशेष अधिकार छ। र तपाईंले केही थाहा छ भने, सफल क्यारियर तपाईं बस प्रत्याभूति। अध्ययन मा एक विदेशी भाषामा नै बढाउँछ अर्को कुरा सबैका लागि छैन। सामान्य नियम र व्यवहार मा उनलाई लागू गर्न सक्षम मास्टर, तपाईं प्रयास धेरै गर्न आवश्यक छ। पहिले, यो एक विदेशी भाषा स्कूल हुनेछ। उनको लागि धन्यवाद, तपाईं सजिलो र किफायती को मूल कुराहरू सिक्न सक्छौं। रहस्य के हो, तपाईं सोध्न? जवाफ सरल छ - विदेशी भाषा को स्कूल तपाईं अनुभव र ज्ञान, साथै विदेशी वाहक संग कुराकानी गर्ने क्षमता संग एक योग्य शिक्षा कर्मचारी शिक्षकहरू प्रदान गर्दछ।
अध्ययन प्रत्येक स्कूल विदेशी भाषा , प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत दृष्टिकोण मा मद्दत पत्ता यसको तागत र कमजोरीहरूलाई आवश्यक प्रविधी छ। अक्सर अभ्यास विदेशी भाषाहरू पाठ्यक्रम प्रयोग गरिन्छ कि सबै भन्दा लोकप्रिय प्रविधी को विचार गर्नुहोस्।
यो विधि धेरै आधारभूत सीपहरू (सुन्न, पढ्न, व्याकरण, लेखन र को साथ विकास आधारित छ बोल्ने)। हरेक शिक्षक को मुख्य लक्ष्य - विदेशी भाषा प्रयोग गर्न विद्यार्थी सिकाउन। विदेशी, व्याकरण संरचना को अभिव्यक्ति, शब्दावली विद्यार्थी emotive र वास्तविक अवस्था आवश्यक सामाग्री को एक चिरस्थायी र तीव्र Assimilation लागि अनुकूल प्रसङ्ग सिकाइएको छन्। Communicative विधि विद्यार्थी र शिक्षक बीचको मनोवैज्ञानिक बाधा नष्ट। यो जोडी र समूहहरू, धेरै खेल मा काम समावेश गर्न सक्छ, छलफलको भाग।
अनुवाद र व्याकरण विधि
व्याकरण लगभग उदाहरण विदेशी भाषामा गराइएको हो, आफ्नो मूल भाषा मा सधैं बताए छ। को जोर विदेशी भाषामा सही लेखन वाक्य र पदहरू छ।
व्याकरण रूपमा रेकर्ड सुनेर मा, शिक्षक संग संवाद व्याख्या छैन। विद्यार्थी एक विदेशी वा रूसी, गराइएको हो उदाहरण को नियम एउटा अडियो क्यासेट संग प्रदान गरिन्छ। विद्यार्थी मात्र होइन सुन्नुपर्छ, तर पनि सबै सुने बारम्बार।
विधि 25 फ्रेम
मिति, यो फ्रेम 25 को विधि कि विश्वास छ - यो एउटा विदेशी भाषा सिक्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। कसरी काम गर्छ: एक अवचेतन स्तर मा विद्यार्थीहरूको अंग्रेजी मा केहि शब्द र मा रूसी जानकारी बुझ्ने तिनीहरूले स्क्रिनमा हेर्न भनेर।
पद्धति Shehtera Igorya
एक भाषा सिक्ने यो विधि को मुख्य विशेषता - यो अरूलाई आफ्नै रूपमा को धारणा छ। सुरुमा, विद्यार्थीहरू को बोध लागि बयान को रूप मा आफ्नो सुझाव व्यक्त गर्न सिकाउनुभयो छन्, र थप खातामा विभिन्न व्याकरण सामाग्री को प्रयोग लिएको छ। यो प्रशिक्षण सबै 16 भन्दा बढी वर्षको लागि आदर्श छ। वयस्कहरूको लागि विदेशी भाषा स्कूल अक्सर यो प्रविधी प्रयोग गर्दछ। वयस्क अहिले र त्यसपछि छाडा सूत्रहरू मा अन्दाज लगाउनु गर्न चाहनुहुन्छ।
पद्धति Runova डेनिस
डेनिस Rounov - मनोवैज्ञानिक र भाषाबिद ज्ञात। विदेशी भाषाहरूको यसको मोड ग्राफिक प्रतीक प्रयोग र नयाँ शब्द तरिका प्रत्यक्ष संघ memorizing व्याकरण सामाग्री जाँच्न छ। यो प्रविधी पनि व्यापक विदेशी भाषा पाठ्यक्रम मा प्रयोग गरिन्छ, तर, यो 14 वर्ष भन्दा छोराछोरीलाई अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, एक विदेशी भाषा स्कूल शिक्षा को धेरै तरिका छ, प्रत्येक शिक्षक व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रत्येक समूह वा व्यक्तिगत लागि चयन। तपाईं को आवश्यक छ कि सबै - एक विदेशी भाषा सिक्न इच्छा छ। यस्तो मनोवृत्ति तपाईंलाई मदत छैन एक भाषा सिक्न कुनै विधि छैन भने। साथै, यो भूल छैन, भाषा अध्ययन गरेपछि भविष्यमा प्रयोग गर्न उचित छ।
स्काइप मा अंग्रेजी
आज देशी वक्ता संग कुराकानी गर्न, स्काइप द्वारा सिक्दै अंग्रेजी झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्। प्रक्रिया चासो हुन सक्छ र तुरुन्त प्रवीणता को व्यावहारिक पक्ष विकसित।
वाक्पद्घति "एक जंगली बँदेल फेंक": मान, पर्यायवाची र व्याख्या
रूसी भाषा को ठूलो मान्छे, आफ्नो शक्ति र सान्दर्भिकता को बयान
Germanic भाषा। को Germanic भाषाहरु र बोलियों को वर्गीकरण
UFOs: त्यो छ, गूढ रहस्य acronyms
"सहित" अल्पविराम आवश्यक छ वा छैन? विराम को नियम: जो मामला एक अल्पविराम मा
आर्मेनियाली खीरे: असामान्य प्रजातिहरू बढ्दै
को स्ट्रबेरी पानी र कति कुनै पनि सिंचाई प्रणाली बेहतर छ गर्न?
"को तुवालो मा पथ": पारित फैशन
सम्पर्क समूह मा नाम। उचित पदोन्नति VKontakte को रहस्य
जब अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बाल पुस्तक को?
Essentiale गुण कलेजो
कस्टर्ड संग स्वादिष्ट र नाजुक मह केक: नुस्खा
फिल्म "को Intern": चलचित्र समीक्षा र एउटा विवरण
Reddened Mantoux परीक्षण - आदर्श वा विकृति?
के भने, एउटा कम्प्युटर तल slows?
को यूराल को स्की रिसोर्ट्स: दर्जा समीक्षा। को यूराल मा सबै भन्दा राम्रो स्की रिसोर्ट